Bocol: Gargaarka degdega – Barocaafimaad |
Bocol: Gargaarka degdega
Hadii bocosha ama nabarka biyaha galeen aysan kugu haynin xanuun, waxaad isku daydaa inaadan dilaacin. Bocosha aan la dilaacin waxey nabarka si dabiici ah uga ilaalin kartaa iney bagteeriya usoo gudubto sidaa darteed waxaa yaraanaya fursadaha uu kugu dhici karo infekshan. Waxaad ku dabooshaa walxaha koolada leh ee loogu talo galay in lagu daboolo nabarada.
Raadi daryeel caafimaad hadii nabarka biyaha galay ama bocosha ay kuula muuqato mid qaaday infekshan. Hadii aad la nooshay xanuunka sonkoroowga ama habka wareega dhiigaaga uu yahay mid daciif ah, la xiriir dhaqtar inta aadan adiga waxba ku sameyn nabarka biyaha galay ama bocosha.
Sidee baa loo miraa nabarka leh biyaha?
Si aad u yareysid xanuun ka dhasha bocosha, isku day inaad ka daadiso dareeraha ku jira bocosha adigoo isku dayaya inaadan jarin maqaarka ku aada bocosha, waxaad raaci kartaa tillaabooyinkaan:
Ku dhaq gacmahaaga iyo bocosha saabuun iyo biyo diiran
Mari bocosha dawada buluugta ah ee loogu talo galay in lagu dilo bagteeriyada
Nadiifi oo jeermis dil cirbada aad rabtid inaad ku muddo
Ku dalooli cirbada bocosha. Isku day inaad cirbada ku muddid marar badan meelo ka mid ah hareeraha bocosha, ka daadi biyaah ku jira bocosha, iskuday inaad jarin maqaarka ka koreeya bocosha
Mari fasaliin, marka aad marineyso isticmaal suuf nadiif ah
Daba gal ku sameey bocosha. Maalin walbo fiiri in bocosha ay qaaday infekshan iyo in kale. Maalmo kedib isku day inaad jartid maqaarka dhintay ee ku hareereysan bocosha adigoo isticmaalaya dawada lagu dilo jeermiska, kedibna mari fasaliin oo ku dabool waxyaabaha koolada leh ee loogu talo in lagu daboolo nabarada yar yar
Sida looga hortago bocosha
Si aad uga gaashaamato in bocolo ay ku sameysmaan lugahaaga waxaad u baahan tahay inaad xirato kabo si fiican kuula eg, sidoo kale waa muhiim inaad isticmaashid sharabaato ama sigsaamo jilicsan. Isku day inaad marwalbo doorato kabaha iyo sharabaadahaa loogu talo iney ka hortagaan bocosha. Gacmahana waxaad u baahan tahay inaad xirato golofisyo mar walbo oo aad sameyneysid waxyaabaha sida cadaadiska wata u xoqa gacmaha.
Cunnada lagu sumoobo: Gargaarka degdegga
Wax shisheeye oo galay dhagta: Gargaarka degdegga
Wax shisheeye oo galay isha: Gargaarka degdegga